I-China Steel Tool Safety Spring Lanyard Quick Release Lobster clip Anti Anti Lost Ukwenziwa nefektri | Spocket
Ithuluzi Lensimbi Ukuphepha Intwasahlobo Lanyard Khipha Ngokushesha AmaLobster Ukugunda Anti Lost
Inombolo Model: CTL-104
Ubuncane be-oda Ubuningi: Ukuxoxisana
Okufakiwe Yekuchumana: Bulk / Inqwaba / PE Bag, Ikhiphela ibhokisi
Isikhathi sokulethwa: izinsuku ezingu-8-10 zokusebenza
Imibala engu-5 eshisayo Anti-elahlekile Ithuluzi Lensimbi Ukuphepha Intwasahlobo Lanyard Quick Release Lobster Ukugunda
Ithuluzi lokuphepha lentambo yasentwasahlobo liyinto ebalulekile yokuphepha. Kuqinisekisa ukuthi uhlala unamathele kubuciko bakho, isiqeshana sokukhishwa esisheshayo sivumela ukuxhumana okulula, vikela amathuluzi akho we-fom awayo, awisa phansi, alahlekelwe, njll. Siyakwamukela usibuze!
Okuhlanganisiwe okujwayelekile: 160mm
Okujwayelekile akuhlanganisiwe: 2m
Ukuphela: isiqeshana se-lobster 2pcs
Umsebenzi: misa amathuluzi awayo
Umbala: omnyama obala, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, ophuzi
Izinzuzo: inkumbulo evelele, ukuguquguquka okuguquguqukayo okuphakeme, ukululama okunwebeka okusheshayo
I-OEM: izitayela ezahlukahlukene, osayizi, imibala iyatholakala
MOQ: 200pcs ngombala ngamunye
Stock isampula ngaphakathi 1-3days, khulula isampula icala
Isampula Fresh ngaphakathi 5-7days, babe isampula ukushaja
Ukuvezwa kokuthunyelwa kwesampula kusezindleko zamakhasimende
intambo, usayizi, umbala, isesekeli, ukupakisha
Phendula kungakapheli amahora angu-24
Ukulawulwa kwekhwalithi ephezulu
1. Yini i-MOQ yakho?
Ngokuvamile MOQ yethu 1,000pcs. Kepha samukela inani elincane le-oda lakho lesilingo. Sicela uzizwe ukhululekile ukusitshela ukuthi ubungakanani obudingayo, sizobala izindleko zokuncintisana kakhulu, ngethemba lokuthi uzofaka ama-oda amakhulu ngemuva kokubheka ikhwalithi nensizakalo yethu kusukela kwisivumelwano sokuqala.
2. Singakanani isikhathi isampula phambili isikhathi?
Kwamasampula esitoko, kuthatha izinsuku ezingama-2-4. Ezinye zazo mahhala. Uma ufuna ukwakheka kwakho, kuzothatha cishe ama-5-7days, ngokusho komkhiqizo ohlukile owudingayo. Noma ngabe kuyini, sizokwenza konke okusemandleni ukuthi siyiqede kusenesikhathi.
3. Singakanani isikhathi sokuhola sokukhiqiza?
Imvamisa kuzothatha izinsuku eziyi-10-15, ezincike ebuningini bakho nasentweni esiyiqinisekisile.
4. Iyini indlela yakho yokupakisha?
Sisebenzisa ukupakisha okuthekelisa okujwayelekile, ngesikhwama / ibhokisi nesudi yebhokisi lomkhiqizo ohlukile, noma ukwenza ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso njengesicelo sakho.
5. Lithini igama lakho lokuhweba?
Imvamisa siphakamisa i-CFR / CIF noma i-CPT ngensizakalo yethu yokudlulisa phambili, i-FOB / EXW nayo ilungile, konke njengesicelo sakho.
6. Siyini isikhathi sakho sokukhokha?
Isikhathi sethu sokukhokha esijwayelekile ngu-T / T ku-akhawunti yethu yenkampani, inani elincane lizokwamukelwa yi-Paypal noma i-Western Union.
7. Iyini indlela yakho yokuthumela?
Ngokuvamile amabhokisi amaningana ngokulethwa okusheshayo, imvamisa sisebenzisa ukuthunyelwa okucacile, okufana ne-DHL, FedEx, UPS, TNT, uma ama-cargo amaningi njenge-GW ngaphezulu kwe-100kg, i-LCL ngolwandle noma ngomoya, ngesitimela konke kuyatholakala, konke ngokwesidingo sakho.
Langaphambilini Inwebekayo Inayiloni Core Purple Safety Lanyard Stop Drop Tooling For Working At Height
Olandelayo: Ithuluzi Lokuloba Lomlingo I-Flexible Coil Lanyard Leash Steel eqiniswe Umthwalo 50KG
Ikhebula Lentambo Ehlanganisiwe Lanyard
Ithuluzi Ozibopha Imisila yenkomo
Stretchable esobala Heavy Duty Plastic Spri ...
High Secuirty Double Engagqwali Carabiner ...
Imfashini Ukudoba Ithuluzi ezigoqile Imisila yenkomo Impahla Safe ...
Plastic Bungee ezigoqile Ithuluzi umsila wenkomo Ukwenza J ...
Deluxe Spring ezigoqile umsila wentambo Intambo Ukuze Inamathisele ...
Inwebekayo Inayiloni Core Purple Ukuphepha Imisila yenkomo Sto ...